ဆီးရီးယားလို အချိန်ကြာမှာမဟုတ်တဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းစစ် - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်သူတွေက ၊ မြန်မာဟာ ပြည်တွင်းစစ်ဆီကို ဦးတည်နေပါတယ်တဲ့ ။ ဒီလို ပြည်တွင်းစစ်ဆီကို ဦးတည်နေတဲ့အတွက် အကြမ်းဖက်မှု့တွေ ၊ သွေးထွက်သံယိုမှု့တွေနဲ့ ဒုက္ခရောက်သူအရေအတွက်လည်း တိုးပွားလာနိုင်ပါသတဲ့ ။ မြန်မာကို ကုလအနေနဲ့ အမြန်ဆုံးမဝင်နိုင်ခဲ့ရင် ဆီးရီးယားလို ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ် ၊ ကမ္ဘာကြီးဟာ မြန်မာကို R2P နဲ့ ကူညီနိုင်ပါသလား .. ? လို လည်း ဆောင်းပါးရှင် CLARA MCMICHAEL က ကုလရဲ့နှောင့်နှေးမှု့တွေကို ဆောင်းပါးအရှည်ကြီးနဲ့ ချက်ကျလက်ကျ မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ် ။
သို့ပေမယ့် နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေး လေ့လာသုံးသပ်သူတွေက ” မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာ ဆီးရီးယားလို အချိန်ကြာမှာ မဟုတ်ပါဘူး ” တဲ့ ။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် စစ်တပ်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှု့တွေကို နှစ်ရှည်တွန်းလှန်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ ၊ စစ်အာဏာဝါဒကို အမြစ်ဖြတ်ချင်နေတဲ့ သတ္တိရှိတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ လတ်တလောဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အစွမ်းကြောင့် ပြည်တွင်းစစ်ဟာ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြောင်းပြန်ရလာဒ်နဲ့အတူ စစ်ကောင်စီဇာတ်သိမ်းနိုင်ပါသတဲ့ ။ ဒါတွေကတော့ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေနဲ့ မြန်မာ့အရေးသုံးသပ် ၊ လေ့လာနေသူတွေရဲ့ အမြင်ပါ ။ မြို့ကြီးတွေပေါ်က စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတောင် အသက်အန္တရယ်အတွက် စိုးရိမ်နေရပြီလို့ လေ့လာသူတွေက ပြောထားပါတယ် ။
ဒီအခြေအနေဟာ ဖြစ်နိုင်သလားလို့ သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် ဒီရက်ပိုင်း တော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေကို အရင်ဆုံးကြည့်ရပါလိမ့်မယ် ။ ကချင် ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ ရှမ်း ၊ ကယားပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ မြို့တွေပေါ်က ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲတွေဟာ စစ်ကောင်စီကို အကြပ်ရိုက်စေတာပါ ။ စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ဟိုအရင်တုန်းက တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ လက်နက်အားကိုး ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပေမယ့် ၊ ဒီနေ့အချိန်အခါမှာတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကနေ ထွက်ပြေးနေရပါပြီ ။ သူတို့ဘဝတွေ မလုံခြူံတော့ပါဘူး ။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေတင်မကပဲ မြို့ကြီးတွေပေါ်က စစ်ကောင်စီ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးစခါစကလို မြောက်ကြွ မြောက်ကြွ မဟုတ်တော့ပဲ အသက်ကိုကာကွယ်ဖို့ ဦးစားပေးနေရပါပြီ ။ ဒါဟာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှု့ တစ်ခုပါ ။
တော်လှန်ရေးအစမှာ ပြည်သူတွေဟာ ကိုယ့်လူမျိူးအချင်းချင်း မတိုက်ခိုက်ချင်လို့ ပန်းပေးခဲ့ကြတယ် ။ ရေကမ်းခဲ့ကြတယ် ။ အစားအသောက်တွေ မျှဝေခဲ့တယ် ။ ဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့ကြတယ် ။ သို့ပေမယ့် အာဏာကိုမက်မောနေတဲ့ MAH နဲ့ အပေါင်းပါ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ အရင်လုပ်ကွက်တွေနဲ့ ခြောက်ပြခိုင်းတယ် ။ တဆင့်တက်ပြီး ဦးခေါင်းကို တည့်တည့်ပစ်ခိုင်းတယ် ။ အက်ဆစ်နဲ့ပက်ပြီး နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်တယ် ။ အိမ်ကို ရိုက်ချိူးဖျက်စီးပြီး ဝင်ဖမ်းတယ် ။ အလောင်းကို ကလီဆာတွေထုတ်ပြီး မသေမသပ်ချုပ် ၊ ပြန်ပို့လိုက်တယ် ။ ဒါတွေဟာ ပြည်သူတွေလက်နက်ကိုင်ချင်တဲအထိ မခံမရပ်ဖြစ်လာအောင် တွန်းပို့ပေးလိုက်တာတွေပါ ။ စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ ခြောက်ပြလို့ ကြောက်သွားမယ်အထင်နဲ့ တဆင့်ပြီးတဆင့် အကြမ်းဖက်လာပေမယ့် ၊ ပြည်သူတွေဟာ ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိတော့ပဲ ” ဒီလိုလုပ်ခံရတာတွေဟာ … ၊ ဒင်းတို့သက်ဆိုးရှည်နေလို့ …၊ ဒင်းတို့ကို အမြစ်ကနုတ်ရမယ် …” ဆိုတဲ့ အတွေးမျိူးနဲ့ တော်လှန်ကြတော့တာပါ ။
ကောင်းပြီ …။. ” နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်နေပြီလဲ ..? ။ ဘာ့ကြောင့် NUG နဲ့ PDF က သတင်းတွေတက်မလာတာလဲ … ? ။ အားမရဘူးဗျာ …. ” လို့ ပြောလာသူတွေကို ရှင်းပြချင်ပါတယ် ။ ဒါဟာ တော်လှန်ရေးရဲ့ အသာစီးရလာမှု့ ပြောင်းပြန်သဘောပါပဲ ။ မှတ်မိကြမှာပါ ။ တော်လှန်ရေးစခါစမှာ စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေနဲ့ ထောက်ခံသူတွေဟာ ” မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ ” ။ ” မတူရင်မတုနဲ့ ” ။. ဆိုသလို ကလိတိတိ ရိတိတိလေးတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ် ။ သို့ပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ ၈၈ လို ငြိမ်မသွားခဲ့ဘူး ။ မငြိမ်နိုင်အောင်လည်း ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာ မခံချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြနေတယ် ။ ဒီလိုအခြေအနေကနေ ရရာလက်နက်နဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဆီကို ဦးတည်လိုက်တယ် ။ စစ်ရဲ့သဘောအရ လက်နက်အင်အား ဘယ်လောက်ပင်သာသော်လည်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာတော့ စစ်ကောင်စီဟာ ပြည်သူတွေကို အရှုံးပေးလာရတယ် ။ တစ်သွေး တစ်သံ တစ်မိန့်ဆိုတဲ့ စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှု့အောက်မှာ အသက်ပေးလာရတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေနဲ့ ထောက်ခံသူတွေဆီကနေ မခံမရပ်နိုင်တဲ့ အသံတွေထွက်လာတယ် ။ ဒါပါပဲ ။ နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ အသာစီးရမှု့ ပြောင်းပြန်သဘောတရားဟာ ပြည်သူ့ဘက်ကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ ။
ဒါဟာ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အစပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ် ။ စစ်ရဲ့သဘောတရားအရ နှစ်ဘက်စလုံး ဆုံးရှုံးမှု့ရှိနိုင်ပေမယ့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ စစ်ကောင်စီဟာ ထွက်ပြေးမလား ၊ လက်နက်ချမလား ၊ အဖမ်းခံရမလား ၊ တစ်ခုခုကတော့ အသေအချာပါ ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေက ရရာလက်နက်နဲ့ တုန့်ပြန်နေဆဲပါ ။ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF က မလှုပ်ရှားသေးပါဘူး ။ ( PDF သတင်းကတော့ အသာစီးရလာတဲ့အတွက်နဲ့ NUG ကိုယ်တိုင်က သတင်းမပေါက်ဖို့ သတိပေးထားတဲ့အတွက် ဘာမှမပြောသေးပါဘူး ။ လတ်တလော ပြောင်းပြန်အခြေအနေဖြစ်လာရတာက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ပြည်သူအချို့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှု့ပဲ ရှိပါသေးတယ် ။
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကို ” PDF က ဘယ်ကနေ လက်နက်အကူအညီရသလဲ ” လို့ သတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး လို့ပဲ ဖြေခဲ့ပါတယ် ။
ဆိုရရင် နွေဦးတော်လှန်ရေးသတင်းတွေ ဘာ့ကြောင့် ငြိမ်နေသလဲ ဆိုရင် ၊ ပြောင်းပြန်အခြေအနေနဲ့ အသာစီးရလာလို့ပါ ။ R2P ကလည်း မဝင်မဖြစ် ဝင်မှာပါ ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်နဲ့ပြည်သူတွေကလည်း ပြန်လည်တုန့်ပြန်နေတာ နေ့စဉ်ပါပဲ ။ PDF ကလည်း လက်နက်ပြည့်စုံ ၊ ပညာပြည့်စုံတဲ့အခါ D-Day နဲ့ ပွဲသိမ်းပါလိမ့်မယ် ။
စစ်ကောင်စီ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ထောက်ခံသူတွေကို အသိပေးချင်တာက ၊ ဒါဟာ ၈၈ မဟုတ်ပါဘူး ။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဝိုင်းသမပါလိမ့်မယ် ။ ပြောင်းပြန်ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေကို သဘောပေါက်ရင် ပြေးပါတော့ ။
ဆောင်းပါး – ဘကြီးအောင် LA